Harka_Bahadur 4548 days ago
बिस्टे 4548 days ago
sky 4548 days ago
Visitor from GB is reading Why I hate Blogs
Visitor from GB is reading Breaking the ice --- Deep
Visitor from US is reading kutae
Visitor is reading UK transit
PAGE: 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 NEXT PAGE
[VIEWED 175502 TIMES]
Posted on 08-13-08 5:49 PM Reply [Subscribe]
यसपालिनी मै फस है ।।
Posted on 08-13-08 5:50 PM Reply [Subscribe]
क्या काइदाको टाईम मा चौतारी बनाएछ बिस्टे ले लु धन्यवाद है ।।
Posted on 08-13-08 5:52 PM Reply [Subscribe]
बोर्ड थर्ड फोर्थ हुने चान्स नगुमाउ , चाडै आइ हालौ है ।।
तेही त हर्के साह्रै मिहिनेत गर्छ सधैं तेस्रा चौथा मात्र हुने भर आज बोर्ड फस्ट हुने मौका द्या नि,अनी के हुँदै छ् हर्के ब्रो?
Posted on 08-13-08 5:55 PM Reply [Subscribe]
के हुनु थाकिएको छ , अनी बिस्टे सोम कता घर पुगी सकेको हो कि कता हो ?
Posted on 08-13-08 5:59 PM Reply [Subscribe]
म घर पुगेर एक हयाव्स देर पनि बसीरा नेपाली एफ एम सुनेर, आज काम मा पेलान भेटेर दिउसो आउन पाईन, अनी तिमी काम मै कि कता ?
Posted on 08-13-08 6:01 PM Reply [Subscribe]
म अब हिंड्ने , एक छीनमा , अनी हसुरी पनि सकेको कती चाडै हो , यती चाडै खाएर नि हुन्छ भन्या ११ बजे फेरी खाने अनी सुत्ने हो बिस्टे ।।
Posted on 08-13-08 6:04 PM Reply [Subscribe]
खै घराँ पाकी रा हुन्छ अनी खाईदियो, सुत्ने टाईम मा भोक लाग्छ फेरी अनी हल्का स्न्याक्स खाने हे हे ...
लु है त म हिंडे एक छीन पछी गिती कार्यक्रम्मा भेटौँला ।।
Posted on 08-13-08 6:06 PM Reply [Subscribe]
पाकी रहने भएत म खाको खाइ हुन्थे होला , पकाउने भको हुनाले म चै भोक्कै हुन्छु १० बजे सम्म अनी मात्रै खाने हो ।।
लौ त है कहिले कोठा गर ढलु जस्तो भको छ मलाई चै , लौ त आहिले लाई बिदा ।।
Posted on 08-13-08 6:29 PM Reply [Subscribe]
Posted on 08-13-08 6:33 PM Reply [Subscribe]
लोक्स ब्रो घर पुगियो, अनी खाना हानियो त, गीतन्जली लाई अहिले देखी सुरु भर बसेको हो ?
Posted on 08-13-08 6:40 PM Reply [Subscribe]
पुगियो घर - घरमा पुगेर नि के गर्ने, एक्लाई एक्लाई
अब खाना पकाउने जमर्को गर्नु पर्ला
नपकाइ खान पाइदैन, पकाइदिने कोही नि छैन
Posted on 08-13-08 6:48 PM Reply [Subscribe]
को को छ?
Posted on 08-13-08 7:14 PM Reply [Subscribe]
Posted on 08-13-08 7:48 PM Reply [Subscribe]
रात्रीकालिन तारेमाम, किन चौतारी आको भनेर भन्नु पर्दैन होला है, खै सुनम न एउटा मिठो गीत।
Posted on 08-13-08 7:59 PM Reply [Subscribe]
गाम्ले हरु का गा हो ।।
Posted on 08-13-08 8:00 PM Reply [Subscribe]
लहरे खै लहरे ।
Posted on 08-13-08 8:42 PM Reply [Subscribe]
ओ रिया रे, लौ यो गीत भेटाएको मैले